Howlgal ka dhan ah darawaliinta ku xadgudbayo shurrucda wadoyinka oo maalintii labaad galay – The Voice of Northeastern Kenya
Howlgal ka dhan ah darawaliinta ku xadgudbayo shurrucda wadoyinka oo maalintii labaad galay
Star FM July 26, 2016
Howlgal balaaran oo lagula tacaalayo darawaliinta ka talaabsada shuruucda wadooyinka loo dajiyay oo maalintii shalay ka qabsoomay guud ahaan dalkani Kenya ayaa lagu soo qabqabtay in ka badan 150 darawaliin ah.
Darawaliinta ayaa ah kuwo dhamaantood ka howlgalo gudaha caasimada Nairobi.
Maamulka qaran ee gaadiidga iyo badqabdka ee loo soo gaabiyo NTSA ayaa shalay bilaabay howlgalkan oo sido kale gacanta lagu dhigayo baabuurta aynan tayadoodu wanagsaneyn ee wadooyinka lagu ka xeynayo.
Sida u amar ku bixiyay abaanduulaha guud ee booliska joseph Boinnet darawaliinta anan u hoggaansamin shuruucda wadooyinka ayaa xabsiga loo taxaabaya, kadibna maxkamadda la hor geynaya si dacwad loogu soo oogo.
Joseph Boinnet ayaa darawaliinta u digay isagoo sheegay cid howlgalkan ka badbadeyso in aynan jirin xita darawaliinta wada gawaarida dowlada .
Nooca baabuurta ee loo yaqaano Matatu-da oo inta badan lagu eedeyo in ay ku xadgudbaan xeerarka wadooyinka ayaa si gaar ah howlgalkan loogu bartilmaamedsanaya.
Ugu dambeyntina maamulka NTSA ayaa sheegay in shilalka sara u sii kaca ay keentay in si weyn looga talaabsado shuruucda wadooyinka.
← Manchester United oo diyaar la ah 38 milyan oo yuro si ay u hesho saxiixa Gabriel Jesus
Isbahaysiyada siyaasadeed ee Jubilee iyo Cord oo ku gacan seyray in doorashada guud dib loo dhigo →
1 thought on “Howlgal ka dhan ah darawaliinta ku xadgudbayo shurrucda wadoyinka oo maalintii labaad galay”
waan soo dhaweynaya howlgalka poliska ee kuxakameyn rabaan sara u kaca shilalka baaburta